Iindaba-IiMveliso eziNtsha-5.5mm iSikruru soMnqonqo weSpinal Pedicle, iikheji zePEEK kunye neePlati zokutshixa zeDistal Radius
Inkqubo yeSixhobo saMandla sezoNyango
IiMveliso eziNtsha-5.5mm iSikruru soMnqonqo weSpinal Pedicle, iikheji zePEEK kunye neePlati zokutshixa zeDistal Radius
Ukufika kweeMveliso eziNtsha!Kungekudala, sineemveliso ezintsha eziphumayo: intambo ephindwe kabini i-5.5mm spinal pedicle screw, i-Cervical PEEK Cages, i-TLIF PEEK Cages kunye ne-Distal Radius Locking Plates.
Izikrufu ze-5.5mm ze-spinal pedicle, njenge-6.0mm screws, zineentlobo ezi-4: i-monoaxial screw, i-monoaxial reduction screw, i-polyaxial screw kunye ne-polyaxial yokunciphisa isikrufu ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo kutyando.Kwaye yonke inkqubo yethu ye-5.5mm zizikrufu eziphindwe kabini, ze-cortical kunye nethambo elirhoxisayo.Ngaphandle koko, izikrufu zokwenyani zinombala, imibala eyahlukileyo ebonisa iidayamitha ezahlukeneyo, ezinceda oogqirha bathathe isikrufu esilungileyo ngexesha lotyando.
Uyilo olutsha lwekheji ye-PEEK yomlomo wesibeleko kunye nekheji ye-TLIF PEEK:
Uyilo lwethu olutsha loyilo lweekheji zePEEK zomlomo wesibeleko zinefestile enkulu yokugxunyelelwa max.umthamo wegrafti, iziphawuli zeradiographic ezibonelela ngengxelo ebonwayo yokubekwa ngokufanelekileyo kunye noyilo lwe-anatomic ngakumbi.
Ikheji yethu entsha ye-TLIF PEEK inika indawo enkulu yokunxibelelana ukuze kuphuculwe inkxaso ye-vertebral yomzimba kunye nokunciphisa umngcipheko wokuthotywa;ngefestile enkulu yokufakela ivumela ubuninzi bendawo yokhuselo lwebhayoloji yokudibanisa;kunye nejometri yayo ekhethekileyo yezinyo inokubonelela ngokuzinza kunye nokunciphisa amandla okugxothwa.
Ipleyiti yokutshixa i-Angle ye-Distal ye-Angle ye-Distal Plam:
Imilo ye-anatomic ingena kufutshane ne-volar ridge enemiphetho engqukuva ukunciphisa ukucaphuka kwezicubu ezithambileyo;
imingxuma yocingo yaseKirschner yokulungiswa kweplate yokuqala;
Elongated LCP Combi umngxuma wokumisa ipleyiti kunye nohlengahlengiso ubude radius;
Iikholamu ezimbini zivumela ukujikwa kwe-fine contouring ye-radial kunye ne-intermediate columns;
Imingxunya ecacileyo ye-screw yokulungiswa kwe-radial styloid ecocekileyo kunye nenkxaso ye-lunate facet kunye ne-distal radioulnar joint;
Imingxuma ye-LCP ye-Combi ivumela ukulungiswa kwe-screw ye-angle-angle esisigxina kunye nokuzinza kwe-angular kwicandelo elinemisonto, okanye ucinezelo ngezikrufu zecortex kwicandelo elingafundwanga.
Ukwakha i-2A, i-H&B Hub, iSayensi kunye nesiXeko seMfundo, eChangzhou, eJiangsu, eTshayina
Ipaki yoShishino, iWujin High-tech Zone, iSithili saseWujin, kwisiXeko saseChangzhou